Ndezvipi zvigadzirwa zvinodhura zvinotengeswa online? | ECommerce nhau
Ndezvipi zvigadzirwa zvinodhura zvinotengeswa online?
Kune zvakawanda zvigadzirwa zvine zvinosekesa zvakakwirira zvehupfumi pamusika, senge mota, zvinhu zvevakawanda kana vanozivikanwa manhamba, akaunganidzwa senge baseball makadhi kana mabheti evatambi vane mukurumbira vakaita saBabe Ruth, mune ino inotevera chinyorwa isu tinokuudza iwe kuti ndezvipi zvinodhura zvakatengwa zvigadzirwa zvakatengwa mu E-commerce webhusaiti.
4 Atlas F Missile Base
Zvinogona kunzwika sekuseka, asi chimwe chezvinyorwa kana mune ino kesi inonyanya kudhura nyika inotengeswa pane yepamhepo saiti Icho chaive chisina chimwe uye hapana chakaderera kupfuura iro guta rese, guta reAlbert, Texas iri munyika yeUnited States yakatengeswa paebay ye 2.5 mamiriyoni emadhora, iyi yakatengeswa muna 2002 uye yaive nenhamba yevagari vashanu. Mushure mekugadziridzwa, ine kasino-imba yekutandarira uko vagari vayo veazvino makumi maviri neshanu vanogona kuzvivaraidza.
Ichi chigadzirwa chaive private jet iyo yakatengeswa online muna 2001 nemutengo wepamusoro we 4.9 mamirioni emadhora, Chinhu ichi chakatengeswa uye chakatengwa neveAfrican-based ndege mutengesi.
Ichi ndicho chigadzirwa chinodhura zvakanyanya chinotengeswa pane ebay saiti, iyi chikepe chemutambarakede chine masutu gumi, makamuri evaenzi 10 imba yakakura ye cinema, jimi, hofisi uye helipad iri padhesiki reizvi. Ngarava iyi yakatengeswa pamutengo wakakwira wemamiriyoni zana nemakumi mana emadhora, kutenga kwakaitika muna140, kusvika parinhasi kuzivikanwa kweanenge achikunda hazvizivikanwe, asi chiri chokwadi ndechekuti inofanirwa kunge iri tycoon kubva munyika yemari.
Ichi chigadzirwa chinoseka, imba yepasi yakavandudzwa muna 2002 zvishoma mushure mezviitiko zvinosuruvarisa zvaSeptember 11, yaive pasi rakateurwa Humbowo hwekurwiswa nemagandanga, iyi bunker yakashandurwa ikaitwa imba yepasi pevhu yemutambarakede yaive nevaraidzo yese kuti irarame pakurwiswa nemagandanga, yakatengeswa nemamiriyoni mazana maviri emadhora mugore rimwe chete rekukudziridzwa kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Ndezvipi zvigadzirwa zvinodhura zvinotengeswa online?
Kufuridzira, iyo nzira yekutengesa yenguva